Bit By Bit - Ethics - 6.6.2 Understanding na hapụụrụ informational ize ndụ
Ihe ize ndụ gbasara nsogbu bụ ihe ize ndụ kachasị na nchọpụta mmadụ; ọ mụbaa n'ụzọ dị ukwuu; ma ọ bụ ihe kachasị ike nghọta.
Ihe ịma aka nke abụọ maka nchọpụta dijitalụ bụ ihe ize ndụ , nke nwere ike imerụ ahụ site na mkpughe nke ozi (National Research Council 2014) . Ihe ọmụma na-emerụ ahụ site n'ikpughe nke ozi nkeonwe nwere ike ịbụ akụ na ụba (dịka, ịfu ọrụ), mmekọrịta mmadụ (eg, ihere), uche (eg, ịda mbà n'obi), ma ọ bụ ọbụna mpụ (dịka, njide maka omume iwu na-akwadoghị). O di nwute, oge dijitalụ na-eme ka mgbasa ozi gbanwee n'ụzọ dị ukwuu-ọ dị nnọọ ọtụtụ ihe ọmụma banyere omume anyị. Ihe ize ndụ nke ọmụma ahụ egosila na ọ siri ike nghọta ma jikwaa tụnyere ihe ize ndụ ndị na-echegbu onwe ha na nchọpụta mmadụ, dị ka ihe ize ndụ anụ ahụ.
Otu ụzọ na-elekọta mmadụ na-eme nnyocha ibelata informational ize ndụ bụ "anonymization" nke data. "Anonymization" bụ usoro nke wepụ ihe doro anya ihe onwe onye nchọpụta dị ka aha, adreesị, na na nọmba ekwentị si data. Otú ọ dị, nke a ji nnọọ obere irè karịa ọtụtụ ndị na-aghọta, na ọ bụ, n'ezie, n'ụzọ miri emi ma na fundamentally mmachi. N'ihi nke ahụ, mgbe ọ bụla m na-akọwa "anonymization," m ga-eji e kwuru mark-echetara gị na usoro a na-emepụta onye ahụ nke anonymity ma ọ bụghị ezi anonymity.
Otu ihe atụ doro anya nke ọdịda nke "aha aha" sitere na njedebe afọ 1990 na Massachusetts (Sweeney 2002) . Ụlọ Ọrụ Inye Mmasị (GIC) bụ ụlọ ọrụ gọọmentị maka ịzụta mkpuchi ahụike maka ndị ọrụ obodo. Site n'ọrụ a, GIC nakọtara ihe ndekọ ahụike zuru ezu gbasara ọtụtụ puku ndị ọrụ nchịkwa. N'ịgbalị iji mee nnyocha, GIC kpebiri ịhapụ ihe ndekọ ndị a na ndị nchọpụta. Otú ọ dị, ha enweghị ike ịkọwa data ha niile; kama nke ahụ, ha "aha" data ndị a site na iwepu ozi dịka aha na adreesị. Otú ọ dị, ha hapụrụ ozi ndị ọzọ ha chere na ọ ga-abara ha uru maka ndị nchọpụta dị ka ozi igwe mmadụ (koodu zip, ụbọchị ọmụmụ, agbụrụ, na mmekọahụ) na ozi ahụike (gaa na data, nchọpụta, usoro) (nọmba 6.4) (Ohm 2010) . N'ụzọ dị mwute, "ntinye aha" a ezughị iji chebe data ahụ.
Ihe odide nke 6.4: "Anonymization" bu usoro nke wepu ihe omuma. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-ahapụ akwụkwọ ndekọ mkpuchi ahụike nke ndị ọrụ obodo, Ụlọ Ọrụ Inye Aka Mmasị nke Massachusetts (GIC) wepụrụ aha na adreesị site na faịlụ ahụ. M na-eji akara nchịkọta gburugburu okwu ahụ bụ "aha njirimara" n'ihi na usoro ahụ na-egosipụta ọdịdị nke ahaghị aha ma ọ bụghị aha nzuzo.
Iji gosipụta mmezighị emezi nke GIC "aha", Latanya Sweeney-mgbe ahụ nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na MIT-akwụ $ 20 iji nweta akwụkwọ ndekọ ntuli aka site n'obodo Cambridge, bụ obodo nke Massachusetts gọvanọ William Weld. Akwụkwọ ndekọ ntuli aka a gụnyere ozi dịka aha, adreesị, koodu zip, ụbọchị ọmụmụ, na okike. Eziokwu ahụ bụ na faịlụ data ahụike na faịlụ votu na-akọrọ ubi-zip koodu, ụbọchị ọmụmụ, na mmekọahụ-pụtara na Sweeney nwere ike ijikọ ha. Sweeney maara na ụbọchị ọmụmụ nke Weld bụ July 31, 1945, akwụkwọ ndekọ ntuli aka gụnyere naanị mmadụ isii na Cambridge na ụbọchị ọmụmụ ahụ. Ọzọkwa, n'ime mmadụ isii ahụ, naanị mmadụ atọ bụ nwoke. Na, nke ndị ikom atọ ahụ, naanị otu òkè Weld si zip koodu. N'ihi ya, data nhoputa gosiri na onye ọ bụla nọ na data ahụike na weld nke ụbọchị ọmụmụ, okike, na koodu zip bụ William Weld. N'ikpeazụ, ihe ọmụma atọ a nyere ya akara aka pụrụ iche na data ahụ. N'iji eziokwu a mee ihe, Sweeney chọtara akwụkwọ ndekọ ahụike Weld, na, iji gwa ya banyere ya, ọ na-ezigara ya otu ihe ndekọ ya (Ohm 2010) .
Onu ogugu nke 6.5: Ndogharia ihe omuma nke "ihe omuma". Latanya Sweeney jikọtara ihe ndekọ ahụike nke "ndị a kpọrọ aha" na akwụkwọ ndekọ ntuli aka ka ịchọta akwụkwọ ndekọ ahụike nke Gọvanọ William Weld nke si Sweeney (2002) , nke 1.
Ọrụ Sweeney gosipụtara isi ihe dị iche iche nke njigide-ịmatakwu - iji nweta okwu site na obodo nchekwa kọmputa. Na mwakpo ndị a, data data abụọ, nke ọ bụla n'onwe ya na-ekpughe ozi dị nro, ejikọta ya, na site na njikọ a, a na-ekpughe ozi dị nro.
Na nzaghachi na ọrụ Sweeney, na ọrụ ndị ọzọ metụtara ya, ndị na-eme nnyocha ugbu a na-ewepụ ọtụtụ ihe ọmụma-ihe niile a na-akpọ "akọwapụta onwe onye" (PII) (Narayanan and Shmatikov 2010) - na-eme usoro "ịdenye aha." Ọzọkwa, ọtụtụ ndị nchọpụta ugbu a ghọtara na ụfọdụ data-dịka akwụkwọ ndekọ ahụike, ndekọ ego, azịza nke ajụjụ nyocha banyere omume iwu na-akwadoghị-nwere ike ịbụ na ọ dị mfe ịhapụ ịhapụ ọbụna mgbe "ndebanye aha." Otú ọ dị, ihe atụ ndị m ga-enye na-egosi na ọ dị mkpa ka ndị nchọpụta na-elekọta mmadụ ịgbanwe echiche ha. Dị ka nzọụkwụ mbụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya iche na data niile nwere ike ịmepụta na data niile nwere ike ịdị nro. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, kama iche na ihe ize ndụ gbasara ozi metụtara obere obere nke ọrụ, anyị kwesịrị iche na ọ na-emetụta ya-na ụfọdụ ogo-maka ọrụ niile.
Uzo abụọ nke nchighari a bu ihe nrite Netflix. Dị ka akọwara na isi nke 5, Netflix hapụrụ 100 nde ihe nkiri fim nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmadụ 500,000 nọ na ya, ma nwee oku na-emeghe ebe ndị si n'akụkụ nile nke ụwa mepụtara algọridim nke nwere ike ime ka Netflix nwee ike ikwu fim. Tupu ịtọhapụ data ahụ, Netflix wepụrụ ihe ọ bụla doro anya na-akọwapụta ozi, dịka aha. Ha mekwara ihe ọzọ ma mee ka e nwee ihe mgbagwoju anya na ụfọdụ n'ime ihe ndekọ (dịka, na-agbanwe ụfọdụ ọkwa site na kpakpando anọ na 3). Otú ọ dị, n'oge na-adịghị anya, ha chọpụtara na ọ bụ ezie na ha gbalịrị, data ahụ ka na-enweghị aha.
Nanị izu abụọ ka a tọhapụrụ data ahụ, Arvind Narayanan na Vitaly Shmatikov (2008) gosiri na ọ ga-ekwe omume ịmụta banyere ihe nkiri nkiri ndị mmadụ. Ihe a na-eme ka ha nwetaghachi aha ha yiri Sweeney's: jikọta ọnụnụ ihe ọmụma abụọ, onye nwere ozi nwere ike ịchọta ihe ma ọ bụ doro anya ịchọta ozi yana nke nwere ihe ndị mmadụ. Onye ọ bụla n'ime isi mmalite data ndị a nwere ike ịbụ onye ọ bụla dị mma, ma mgbe ha jikọtara ya, ihe dataset ahụ jikọtara nwere ike ịmepụta ihe ize ndụ. N'ihe gbasara Netflix data, lee otú ọ ga - esi eme. Cheedị na m na-ahọrọ ịkọrọ ndị m na-arụkọ ọrụ m echiche banyere ihe nkiri na fim ọchị, mana na m ahọrọ ka m ghara ịkọrọ m echiche m banyere ihe nkiri okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ndị ọrụ mụ na ha na-arụ ọrụ nwere ike iji ozi m na-akọrọ ha iji chọta ihe ndekọ m na data Netflix; ozi m na-ekerịta nwere ike ịbụ akara mkpịsị aka dịka ụbọchị ọmụmụ nke William Weld, zip zip, na mmekọahụ. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ha achọta akara m pụrụ iche na data ahụ, ha nwere ike ịmụta ntụle m maka fim nile, gụnyere fim ndị m na-ahọrọ ịghara ịkekọrịta. Na mgbakwunye na ụdị agha a na- elekwasị anya lekwasịrị anya n'otu onye, ​​Narayanan na Shmatikov gosikwara na ọ ga-ekwe omume ime mwakpo ọnụ - nke metụtara ọtụtụ ndị mmadụ-site na ijikọ data data Netflix na data ntanetị na fim nke ụfọdụ ndị họọrọ ka ịdebe na Internet Movie Database (IMDb). N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ihe ọ bụla nwere ike ịchọta onye ọ bụla-ọbụnadị usoro fim ha-nwere ike iji mee ka ha mata.
Ọ bụ ezie na data Netflix nwere ike ịchọtaghachi ma ọ bụ ma ọ bụ nke a na-eche ihu ma ọ bụ nke na-ebu ọnụ, ọ ka nwere ike iyi ka ọ dị obere. A sị ka e kwuwe, ihe nkiri fim anaghị adị mfe. Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu n'ozuzu ya, maka ụfọdụ mmadụ 500,000 na dataset, ihe nkiri fim nwere ike ịbụ ezigbo ihe. N'ezie, na nzaghachi na nyochaghachi ọzọ, nwanyị nwanyị nwere mmasị nwanyị nabatara otu ime ihe megide Netflix. Nke a bụ otu esi gosipụta nsogbu ahụ na ikpe ha (Singel 2009) :
"[M] ovie na rating data nwere ihe ọmụma nke a ... nke ukwuu na onye na-echebara agwa. Ihe nkiri fim ahụ nke onye ahụ na-ekpughe mmasị onwe onye na / ma ọ bụ ọgụ na nsogbu dị iche iche, gụnyere mmekọahụ, ọrịa uche, mgbake na ịṅụbiga mmanya ókè, na mmerụ sitere n'inwe mmekọahụ, mmegbu anụ ahụ, ime ihe ike n'ụlọ, ịkwa iko, na mmeko nwoke. "
Nyochaghachi nke nchịkọta Netflix nke Netflix na-egosi ma data niile nwere ike ịmata ma na data niile nwere ike ịdị na-eche. N'oge a, ị nwere ike iche na nke a na-emetụta data ndị na-ekwu na ha bụ ndị mmadụ. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụghị ụdị ahụ. Na nzaghachi na arịrịọ Freedom of Information Law, Gọọmentị New York City wepụtara ihe ndekọ nke njem ọ bụla na taxi na New York na 2013, tinyere oge nkwụsị na oge mgbapụta, ebe, na ụkọ ego (cheta na isi nke 2 na Farber (2015) jiri data yiri nke a chọpụta ihe ndị dị mkpa na akụ na ụba. Ihe ọmụma ndị a banyere njem taxi nwere ike iyi ihe na-adịghị mma n'ihi na ọ dị ka ha anaghị enye ndị mmadụ ozi gbasara ha, mana Anthony Tockar ghọtara na akwụkwọ taxi a nwere ọtụtụ ihe ọmụma gbasara ndị mmadụ. Iji maa atụ, ọ na-ele anya njem ọ bụla na-amalite na Hustler Club-nnukwu ụlọ ịgba egwú na New York-n'etiti etiti abalị na 6 nke ụtụtụ wee chọta ebe ha na-ada. Nchọpụta a kpughere-nke kachasị mkpa-ndepụta nke adres nke ụfọdụ ndị na-agakarị Hustler Club (Tockar 2014) . O siri ike iche na gọọmenti obodo nwere nke a n'uche mgbe ọ wepụtara data ahụ. N'ezie, otu usoro a nwere ike iji chọta adreesị ebe obibi nke ndị na-aga n'ebe ọ bụla n'obodo - ụlọ ọgwụ, ụlọ gọọmenti, ma ọ bụ ụlọ ọrụ okpukpe.
Ihe abụọ a nke Netflix Prize na data nke taxi New York City na-egosi na ndị ọkachamara nwere ike ịdabaghị na-atụle ihe ize ndụ nke data na data ha hapụrụ-na ihe ndị a abụghị nke pụrụ iche (Barbaro and Zeller 2006; Zimmer 2010; Narayanan, Huey, and Felten 2016) . Ọzọkwa, n'ọtụtụ ikpe ndị dị otú ahụ, data nhụghachị ka na-enweghi ntanetị n'ịntanetị, na-egosi na ọ bụ ihe isi ike mgbe ọ na-emeziputa ntọhapụ data. N'akụkụ, ihe atụ ndị a-yana nchọpụta na sayensị kọmputa gbasara nzuzo-eduga ná nkwubi okwu dị mkpa. Ndị nchọpụta kwesịrị iche na data niile nwere ike ịmepụta na data niile nwere ike ịdị nro.
N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị ngwọta dị mfe maka eziokwu na data niile nwere ike ịmata ma na data niile nwere ike ịdị nro. Otú ọ dị, otu ụzọ iji belata ihe ọmụma dị egwu mgbe ị na-arụ ọrụ na data bụ ịmepụta na ịgbaso atụmatụ nchedo data . Atụmatụ a ga-ebelata ohere na data gị ga-adaba ma ọ ga-ebelata nsogbu ahụ ma ọ bụrụ na eleba anya na-eme. Ihe ụfọdụ nke atụmatụ nchedo data, dị ka ụdị ntinye nzuzo iji mee ihe, ga-agbanwe oge, ma UK Data Services na-eji nlezianya hazie atụmatụ nke nchekwa data na ụzọ ise ha na-akpọ safị ise : ọrụ nchekwa, ndị nwere nchebe , ntọala dị mma, data nchedo, na ntinye nchekwa (tebụl 6.2) (Desai, Ritchie, and Welpton 2016) . Enweghị onye ọ bụla n'ime nchebe ise ọ bụla na-enye nchebe zuru oke. Ma, ha na-etolite otu ihe dị ike nke ihe nwere ike ibelata ihe ize ndụ gbasara ozi.
Isiokwu nke 6.2: "Ise asa asa" bụ Ụkpụrụ maka (Desai, Ritchie, and Welpton 2016) atụmatụ Nchedo Data (Desai, Ritchie, and Welpton 2016)
Ọrụ nchekwa Ihe ndị a na-eji arụ ọrụ na data nye ndị dị mma
Ndị nchebe Enwere ohere maka ndị mmadụ nwere ike ịtụkwasị obi na data (dịka, ndị mmadụ na-agbaso ọzụzụ ọzụzụ omume)
Data nchekwa A na-amatapụta data ma chịkọta ya ruo n'ókè o kwere mee
Ntọala nchekwa A na-echekwa data na kọmputa na anụ ahụ kwesịrị ekwesị (dịka, ụlọ ekpochi) na ngwanrọ (dịka, nchedo paswọọdụ, ezoro ezo) nchebe
Nwepụta nchekwa A na-enyocha mmepụta nnyocha iji gbochie mmebi iwu nzuzo
Na mgbakwunye na ichebe data gị mgbe ị na-eji ha, otu nzọụkwụ n'ime usoro nchọpụta ebe ihe ize ndụ nke ihe ọmụma dị na-atọ ụtọ bụ ịkekọrịta data na ndị nchọpụta ndị ọzọ. Nkọwa data n'etiti ndị ọkà mmụta sayensị bụ ihe dị mkpa nke nkà mmụta sayensị, ọ na-enyekwa aka na ọganihu nke ihe ọmụma. Nke a bụ otú UK House of Commons si kọwaa mkpa nke òkè data (Molloy 2011) :
"Ịnweta data dị mkpa ma ọ bụrụ na ndị nchọpụta ga-amụ nwa, chọpụta ma rụpụta ihe ndị a kọrọ na akwụkwọ ahụ. Nkwupụta ahụ aghaghị ịbụ na, ọ gwụla ma è nwere ihe siri ike kpatara ya, a ghaghị ịkọwapụta data ma mee ka ọha na eze mara. "
N'agbanyeghị nke ahụ, site na isoro onye nchọpụta ọzọ kerịta data gị, ị nwere ike ịmalite ịbawanye ihe ọmụma maka ndị na-agụ gị. Ya mere, o nwere ike iyi na njirịta data na-eme ka esemokwu dị n'etiti ọrụ nke ịkekọrịta data na ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ na ibu ọrụ iji belata ihe ọmụma gbasara ndị na-eso ụzọ. Ọ dabara na, nsogbu a adịghị njọ dị ka o yiri. Kama nke ahụ, ọ ka mma ịtụgharị uche banyere ịkekọrịta data dị ka ịdaba na continuum, na isi ihe ọ bụla na continuum inye ọdịiche dị iche iche nke uru nye ọha mmadụ na ihe ize ndụ nye ndị na-eso (ọgụgụ 6.6).
N'okwu dị oke, ị nwere ike ịkekọrịta data gị na onye ọ bụla, nke na-ebelata ihe ize ndụ nke ndị sonyere kamakwa ọ na-ebelata uru dị n'aka ọha mmadụ. N'okwu nke ọzọ, ị nwere ike ịhapụ ma chefuo , ebe data bụ "aha" ma gwa onye ọ bụla. Ndị na-eme ka ị ghara ịhapụ data, ntọhapụ na echefu na-enye ma ọganihu dị elu karịa ọha na eze na ihe ize ndụ dị elu karịa ndị ga-eso. N'etiti ikpe abụọ ndị a dị iche iche dị iche iche, gụnyere ihe m ga-akpọ ogige ubi a gbara ogige . N'okpuru nke a, a na-akọrọ data na ndị na-agbaso ụfọdụ njirisi ma kwenye na iwu ụfọdụ ga - agbatị (dịka, nlekọta site na IRB na atụmatụ nchedo data). Ogige ubi a gbara ogige na-enye ọtụtụ uru nke ịhapụ ma chefuo na enweghị ihe ize ndụ. N'ezie, ụzọ dị otú ahụ na-emepụta ọtụtụ ajụjụ-ndị kwesịrị ịnweta, n'ọnọdụ ndị dị aṅaa, na ruo ogologo oge, onye kwesịrị ịkwụ ụgwọ maka ịnọgide na-elekọta ma na-elekọta ndị uweojii n'ogige a gbara ogige, na ihe ndị ọzọ-ma ndị a enweghị ike ịkwụsị. N'ezie, enwererịrị ịrụ ọrụ ubi n'ubi nke ndị na-eme nchọpụta nwere ike iji ugbu a, dịka ihe ndekọ data nke Consortium Inter-University for Political and Social Research na Mahadum Michigan.
Onu ogugu nke 6.6: Ntugharia ntaneti nwere ike ida na continuousum. Ebee ka ị ga-anọ na nke a na-adabere na nkọwa zuru ezu nke data gị, na nyochaa nke atọ nwere ike inyere gị aka ikpebi ihe kwesịrị ekwesị na ihe ize ndụ gị na ikpe gị. Ụdị ọdịdị nke usoro a dabere na nkọwa nke data na nyocha ọchụchọ (Goroff 2015) .
Ya mere, ebee ka data site na ọmụmụ gị ga-adị na continuum nke enweghị òkè, ubi ogige, na ntọhapụ ma chefuo ya? Nke a dabere na nkọwa nke data gị: ndị na-eme nchọpụta aghaghị ịkwanyere ndị mmadụ ùgwù, ịba uru, ikpe ziri ezi, na nkwanye ùgwù maka iwu na mmasị mmadụ. N'ile anya site na nke a, ntinye data abụghị ụdị mgbakọ dị iche iche; ọ bụ naanị otu n'ime ọtụtụ akụkụ nke nchọpụta nke ndị nchọpụta ga - achọpụta ihe kwesịrị ekwesị.
Ụfọdụ ndị nkatọ na - emegidekarị òkè data n'ihi na, n'echiche m, ha na-elekwasị anya n'ihe ize ndụ ya - bụ nke doro anya na ọ dị adị-ma na-eleghara uru ya anya. Ya mere, iji gbaa ume na-elekwasị anya n'ihe ize ndụ na uru, m ga-achọ ịnye ihe atụ. Kwa afọ, ụgbọala nwere ọtụtụ puku ọnwụ, ma anyị anaghị anwa igbochi ịkwọ ụgbọala. N'ezie, ịkpọ oku iji gbochie ịkwọ ụgbọala ga-abụ ihe efu n'ihi na ịkwọ ụgbọala na-enyere ọtụtụ ihe dị ebube aka. Kama nke ahụ, ọha mmadụ na-etinye ihe mgbochi na onye nwere ike ịkwọ ụgbọala (dịka, mkpa ọ ga-abụ afọ ụfọdụ na ịgafe ule ụfọdụ) na otu ha ga-esi na-ebugharị (dịka, n'okpuru nkwụsị ọsọ). Ulo oru ka ndi mmadu kwadoro iwu ndi a (dika ndi uweojii), anyi anahu kwa ndi mmadu ndi mebiri ha. Otu ụdị echiche ahụ ziri ezi nke ọha mmadụ na-emetụta ịhazi ịkwọ ụgbọala nwekwara ike itinye n'ọrụ na ịkekọrịta data. Nke ahụ bụ, karịa ịme arụmụka absolutist maka ma ọ bụ megide nbudata data, echere m na anyị ga-eme ọganihu kachasị elu site n'ilekwasị anya na otu anyị nwere ike isi belata ihe ize ndụ ndị ahụ ma nwekwuo uru site na ịkekọrịta data.
Iji kwubie, nsogbu data nwere abawanyewanye, ọ na-esikwa ike ịkọ ma kọwaa. Ya mere, ọ kachasị mma ịchọrọ na data niile nwere ike ịmepụta ma bụrụ nke nwere ike ịnwe nlezianya. Iji belata ihe ize ndụ gbasara ihe ọmụma mgbe ị na-eme nchọpụta, ndị nchọpụta nwere ike ịmepụta ma soro usoro nchedo data. Ọzọkwa, ihe ọmụma gbasara ihe ọmụma adịghị egbochi ndị nchọpụta na ndị ọkà mmụta sayensị ndị ọzọ na-edekọrịta data.